ချစ်စိတ်စွမ်းအားတိုးပွားစေသည်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ချစ်စိတ်စွမ်းအားတိုးပွားစေသည်များ
Posted by ေခတ္သစ္ေပါက္က်ဳိင္း on Jan 13, 2011 in Health & Fitness, News | 10 comments
ဒီပိုစ့်လေးကို မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ထုပ်ဝေသော ဟဲလိုမြန်မာဂျာနယ်မှ ဖတ်မိသည်လေးကို ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးတစ်ခွပ်နေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်စိတ်စွမ်းအားကို တိုးပွားစေတဲ့ အစားအစာတွေက သွေးအတွင်းဟော်မုန်းပမာဏ – အထူးသဖြင့် ကျားဟော်မုန်း တက်စထရိုစတီရုန်း ပမာဏကို မြင့်တက်စေရန် အတွက်ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်၊ သဘာဝကပေးစွမ်းတဲ့ သစ်သီးတွေစားပြီး ချစ်စိတ်စွမ်းအားများကိုရယူပါတဲ့။ ၁။ထောပတ်သီး ။ ။ထောပတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ ဖောလိတ် Folate ဓါတ်က ချစ်စိတ်စွမ်းအားတွေကိုတိုးပွားစေပါတယ်၊ထောပတ်သီးရဲ့တခြားသောဓာတ်ပေါင်းတွေက အချစ်စွမ်းအင်ကိုရရှိစေပါတယ်။ ၂။ဌက်ပျော်သီး။ ။ဌပ်ပျော်သီးများဟာလည်း ချစ်စွမ်းအင်တွေ၊စိတ်စွမ်းအားတွေကိုတိုးပွားစေပါတယ်၊ဌက်ပျော်သီးမှာပါတဲ့ ဘရိုမီလိမ်း Bromelain အင်ဇိုင်းက ချစ်စိတ်စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်၊ဒါ့အပြင် ပိုတက်စီရမ် Potassium ဗီတာမင်ဘီ Vitamin B တွေကစွမ်းအားတွေပေးစွမ်းတာကြောင့် အချစ်စိတ်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ၃။စွန်ပလွန်သီး ။ ။အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေက စွန်ပလွန်သီးဟာ ချစ်စိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့လူံဆော်ပေးတယ်လို့ယူဆကြတယ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ် Amioacid တွေများစွာပါဝင်တဲ့ စွန်ပလွန်သီးက ချစ်စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ သက်လုံကောင်းစေပါတယ်။ ကဲ ကိုခိုင်ရေ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး…….
ယူအက်စ်နေတဲ့ သန်သန်မြန်မြန် … သူဂျီးကိုများ စော်စော်ကားကား.. ငှက်ပျောသီး လာစားခိုင်းနေတယ်..။
ယူအက်စ်မှာကလေ..။ မြန်မာပြည်က ..ဦးဦးတို့အကြိုက်… Viagra ရော Cialis ရော လိုသလောက်ရတယ်ဗျ။
မှောင်ခိုဆိုပြိး လေဆိပ်ကခိုးသွင်းနေစရာမလိုဘူး..။ ကဲ..။
ရွှေစိတ်တော်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ သူဂျီးမင်းခင်ဗျား…..ယူအက်စ်မှာ ဓါတုဗေဒ ဆေးဝါးများသာ မှီဝဲနေရသမို့…..သဘာဝ သီးနှံအားတိုးဆေးများ ဆက်သလိုက်တာပါ။….စိတ်မဆိုးရဘူးနော်….ဟဲ….ဟဲ….ဟဲ…
သူ့ အချစ်တိုးမှာလား ကိုယ့်အချစ်တိုးမှာလား နှစ်ယောက်လုံးအတွက်လား ဟာာာာာာာ နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဘွာတေး
ကိုယ့် အချိုးတစ်တာ ဘဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။။။အကိုလေးတို့ရယ်။။။။။
အာရပ်တွေ စွန်ပလွန်သီးကို အားရှိဖို့အတွက် စားတာကတော့ သောက်ရမ်းပဲတဲ့။ ဒူဘိုင်းက အသိတဦးပြောတယ်။ ဌက်ပြောသီးကလည်း ဖီးကြမ်းပဲအားရှိတယ်လို့ ကြားဖူးသည်ပ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဒါသဂျီးမင်းကို သက်သတ်လွတ်စားဖို့ တဖက်လှည့်နဲ့ တိုက်တွန်းပေးတာကို။ မဟုတ်ရင် သူက ကိုဘေးအမဲသားစတိတ်ကိုပဲ လှိမ့်ပိမ့်အုပ်နေတော့တာ။
I ကတော့ ထောပတ်သီး၊ စွန်ပလွန်သီး၊ ဌက်ပြောသီး အကုန်ကြိုက်လို ့စားတာဘဲ ၊ ဘာမှမဖြစ်ပေါင်!
Are you guy or girl….May be your G…..,?
viagra တို့ကside effect ရှိနိုင်တယ်။ငှက်ပျောသီးကမရှိဘူး။
လူပျိုကြီးတွေ အပျိုကြီးတွေဆိုရင် ဘယ်သူ့သွားချစ်ရပါ့။
အိမ်က ကြောင်လေးတွေ ခွေးလေးတွေကိုလား
လူပျိုကြီးတွေကရှာကြံပီးချစ်လို့ရပါသေးတယ်….သတိဤဆေးညွန်းသည် အမျိုးသားများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။viagra က လူငယ်တွေအတွက်မသင့်တော်ပါဘူး၊အနည်းဆုံးအသက်(၄၀)ကျော် (၆၀)ကျော်များအတွက်ပဲသင့်တော်ပါတယ်လို့ဆေးစာအုပ်တစ်ထဲမှာဖတ်ဘူးပါတယ်။